May 2013 ~ For You Mobile Service
For You Mobile Service
Frozen Keyboard အဟောင်းကို system app အဖြစ်သွင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်….
Frozen Keyboard Pro 0.4.4 ကိုလည်း install လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်…
Xperia တွေအတွက်လည်း “ျ” အပေါ်မတက်ပါဘူး…
ဆြာဖြိုးညီညီရဲ့ “ျ” များအပေါ်မတက်ရ ကို ယူသုံးထားပါတယ်…
root လုပ်ထားပီးသား ဖုန်းဖြစ်ဖို့လိုပါမယ်…
မိမိ android ဖုန်းမှ setting -> developer option -> usb debugging ကို on ပီး computer နဲချိတ်ပါ…
ZawgyiInstaller.exe ကို double-click…
မိမိဖုန်းက XPERIA ဆိုလျှင် XPERIA ကိုနှိပ်ပါ…
XPERIA မဟုတ်လျှင် NORMAL ကိုပဲနှိပ်ပါ…
ခနစောင့်ပါ… ဖုန်း restart ကျပြီး ပြန်တက်ရင် မြန်မာစာ font နဲ့ frozen keyboard သွင်းပီးသွားပါပီ…
လွတ်လပ်စွာ share နိူင်ပါတယ်…
Published On: Sat, May 11th, 2013 Android Tutorials / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By Hein Maung Huawei ဖုန်း Step2error ကို ဘယ်လိုရှင်းမလဲ ?
ကျွန်တော်က developer လည်းမဟုတ်သလို ပညာရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အခုမှလေ့လာနေဆဲပါ။ ဒါပေမဲ့ step2fail ပြရင် ကျွန်တော်ရှင်းနေကြ နည်းလမ်း
ပီးရင်တော့ အဲ့ကောင်လေးကို install လုပ်လိုက်ပါ computer မှာ ။ ခုနက output ထွက်ထားတဲ့ folder ထဲကိုသွားပါ ။ များသောအားဖြင့် boot.img ဖိုင်နဲ့
recovery.img ဖိုင်လေးက 11 နဲ့ 12 မှာပါ။
ဟုတ်မဟုတ် အဲ့ကောင်ရဲ့ coding တွေကို တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ နံပါတ် ၁၁ ပေါ်မှာ double click နှိပ်ပါ။ select the program formalist ကိုဝင်လိုက်ပါ။ ခုနကသွင်းထားတဲ့ program HxD ကိုရှာပါ။ မတွေ့ရင် browse ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ program file ထဲရောက်သွားတာ တွေ့ရမှာပါ။ အဲ့ထဲက HxD ဖိုဒါထဲဝင်လိုက်ပါ။ HxD.exe ကိုရွေးပေးပါ။ open နှိပ်ပါ။ ok နဲ့ ပြန်ထွက်ပါ။ code လေးတွေ မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်းပါ ။ ထိပ်အစမှာ android နဲ့စပါတယ်။ ကုဒ်အကြောင်းတွေတော့ မရှင်းပြတတ်ပါဘူး။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ developer မှ မဟုတ်တာ အဲ့ code ပါတဲ့ဖိုင်နှစ်ခုကို rename ပြန်ပေးပါ ။ အဲ့လို code ပါတဲ့ ဖိုင် ၂ ခု မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အာဆိုရင် file size ကို တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ် သေးတဲ့ကောင်က boot.img ဖိုင်ဖြစ်ပြီး file size ကြီးတဲ့ ကောင်က recovery.img ဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အာ့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ recovery.img ဖိုင်လေးရပါပီ။
stock recovery သွင်းပီးရင်တော့ အထက်ပါ step2error ပျောက်ပီပေါ့ ထင်တာပြောတာနော် developer မဟုတ်ဘူး အပေါ်က ခွဲထုတ်တဲ့နည်းအတိုင်း အကုန်လုံး မရပါဘူး။ တစ်ချို့ဟာတွေဆိုအဲ့ လို coding တွေ လုံးဝမပါပါဘူး။ အာ့မျိုးဆို android kitchen နဲ့ခွဲရတယ်လို့ ဆွာသမားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းလေ့လာနေတုန်းပါ မသုံးတတ်သေးပါဘူး။
5.နောက်တစ်နည်း အာ့ကောင်ကတော့ firmware ပျက်သွားတယ် ပီးတော့ recovery ခေါ်မရတော့ဘူး။ firmware ပြန်တင်တယ် step2fail ဖြစ်တယ် ။ sd ချိန်းတယ် မကောင်းဘူး ? cwm တင်တယ် မ၀င်ဘူး? အာ့မျိုးဆို ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲ ? အာ့တွေက ဘယ်မှာအဖြစ်များလဲ ? bootloader unlock လုပ်ကတဲ့ကောင်တွေမှာဖြစ်ပါတယ်။ list
of booloader unlock
Post By Hein Maung (MLN)
Unlock BootLoader အရင်လုပ်ရပါမယ်….
ပြီးရင်တော့အောက်ကအဆင်တွေကိုလုပ်လိုက်ရင် Root ရပါပြီ။
လိုအပ်တာလေးအရင် Download လုပ်လိုက်ပါ..
ဒေါင်းပြီးရင်တော့ rar ကို Extract လုပ်လိုက်ပါ…
update.zip ကို SD Card ထဲထည့်လိုက်ပါ…..
Desire VC recovery.rar ကို Extract ထပ်လုပ်ပါ…
Volume Down + Power ကို ဖိနှိပ်လိုက်ပါ…..
Fastboot ကို ပါဝါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
点我运行.bat ကို Run လိုက်ပါ..
ပြီးရင်တော့ Battery ဖြုတ်ပြီး
Volume Down + Power ကိုဖိနှိပ်လိုက်ပါ…..
Recovery Mode ၀င်သွားပါလိမ့်မယ်…..
Super User အလန်းလေးတော့တွေ့ရပါပြီ။
မြန်မာ Font Developer နဲ့ Frozen Developer တွေကို Credit ပေးပါတယ်.
Unlock လုပ်ပြီးသားလူကတော့ ဖုန်းကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။
Insecure Boot Image ပြုလုပ်နည်း (For NewBie)
Insecure Boot Image ပြုလုပ်ပြီး Root လုပ်လို့ရပါတယ် … ။
Insecure ဆိုတာ mount/remount လုပ်ခွင့်ပိတ်ထားတာကို Admin User အနေနဲ့ရအောင် Hack ယူလိုက်တာပါ။
ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင် လေးကို desktop ပေါ်မှာဖြည်လိုက်ပါ။ bootimg.exe လေးရှိတဲ့ ဖိုလ်ဒါထဲကို ကိုယ်ဖြည်ချင်တဲ့ Boot.img လေးထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်
boot.bat လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
၁. boot.img ကိုဖြည်ဖို့ ၁ ကိုရွှေးပေးပါ။ cmd box ထဲကအောက်ကစာသားမျိုးကို ကူးယူထားပါ။ repack boot.img လုပ်ရင်လိုပါလိမ့်မည်။
၂. default.prop ကို edit လုပ်ဖို့ ၂ ကိုရွှေးပေးပါ။ Edit box ထဲက ro.secure=1 ကို ro.secure=0 ပြောင်းပါ။ file ကိုနှိပ်လိုက်ရင် popup menu လေး
ထဲက save ကိုရွှေးပြီး save လိုက်ပါ။ နောက်တကြိမ် file ကိုနှိပ်ပြီး exit ကိုနှိပ်ပြီး Editor မှထွက်လိုက်ပါ။
၃. Boot.img ပြန်ပြီးလုပ်ရအောင်— မူရင်း boot.img ကိုအမည်ပြောင်းထားပါ။
Enter Copied Words: ဆိုတဲ့နေရာမှာ Enter Copied Words:base cmdline page_size padding_size
ဒီလိုလေးထည့်ပါ ဥပမာ Enter Copied Words: 0×200000 “androidboot.hardware=huawei loglevel=1″ 2048 2048
ပြီးရင် ကီးတစ်ခုခုကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အားလုံးပြီးပါပြီ … ။ အဆင်ပြေကြပါစေ … ။
ဒီမှာဒေါင်းပါ ——————–> http://www.mediafire.com/?ppx5nns47dw8izv
Credit To >> Baganthar @ MPX Team
MTK Roms download 3:31 PM
Note2ex
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=191485&uk=369379295 HDC S3 G9300 pw: jajatong.com
eid=156131&uk=369379295 Read More
CWM သွင်းပြီးပြီ ဆိုတော့ root နည်းစပါမယ် .. အပေါ်မှာ ဒေါင်းထားတဲ့ CWM-SuperSU-v0.99.zip ဖိုင်လေးကို sd ကဒ်ထဲကို folder မဆောက်ပဲ ထည့်ထားပါ
…. ပြီးရင် ဖုန်းပိတ် recovery mode ကို vol+ power home တွဲနှိပ်ပြီး ၀င်ပါမယ် ..ကြာကြာနှိပ်ထားပါ ..logo တက်လာရင် လွှတ်လိုက်ပါ .ဒီပုံစံလေး တက်လာရင် recovery mode ထဲကိုရောက်ပါပြီ..
Screen maker – sale သုံးပြီး ဖုန်း ပုံစံ အမျိုးမျိုးပြောင်းမယ်
Screen maker – sale
တော်တော်လေးလန်းလို့ တင်မိတယ်ဗျာ.. သုံးပြီး အကြိုက်တွေမယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ် ကိုယ်ရဲ့ ဖုန်းက HTC one X ဆိုပါစို့ .. SAMSUNG note ပုံစံဖုန်းကို *
screenshot * ပုံလေးထည့်ပြီးပြောင်းလဲမယ် ပုံကိုကြည့်ရအောင်ဗျာ
ဒီထဲမှာနောက်တစ်ခြား ဖုန်းများစွားလည်းရှိသေးတယ် download နိုပ် ခဏစောင့်ပြီးရင် စတင်ပြောင်းလဲလို့ ရပါပြီ screen maker – sale နဲ့ ပြောင်းလဲထားတဲ့ပုံ ကို show နဲ့ ကြည့်ရင်း auto save ပေးပါတယ် share လည်းလုပ်နိုင်ပါသေးတယ် ဖုန်းမှာ screen maker – sale ကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါ
ကိုယ်ပုံထည့်ချင်တဲ့ဖုန်းပုံကို အရင် download နိုပ်ပြီးခဏစောင့်လိုက်ပါ
ရပြီဆို ဖုန်းပုံမှာ download ဆိုတာလေးပျောက်သွားပါတယ်
ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ screenshot ပုံကို image မှာရွှေးလိုက်ပါ
device reflection > on
screen reflection > on
Generate image ကိုနိုပ်ပြီး ခဏစောင့်လိုက်ပါ
show _____ share ထွက်လာပါမည် ကျနော် အောက်မှာပြထားတဲ့ အတိုင်း အရိပ်လေးနဲ့ ပေါ်ပါတယ် .. ကိုယ်ကြိုက်သလိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်
HTC one X____________________SAMSUNG note
screen maker – sale ကိုအောက်တွင်ဒေါင်းပါ
(ချို့ ယွင်းချက် Samsung GALAXY S4 , Xperia Z HTC One မပါသေးပါဘူး )
Facebook အကောင့် Lock မကျအောင် ဒီလို ကာကွယ်ထားပါ 4:39 PM
Facebook ဟာ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ပြဿနာ တော်တော်ရှာလာတယ်လို့ပြောရမလောက်ပါပဲ
တကယ်တော့ သူ့ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် Policy တွေ ပြောင်းထားတာပါ
နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်မှုတွေလုပ်တယ် .. Cyber Attack တွေကြံစည်လာတယ် .. စသည်ဖြင့် အများကြီးပဲဗျာ ..
တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ ဆက်ဆံနေရတာဆိုတော့ Facebook ကိုလည်း အပြစ်ပြောလို့မရပါဘူး ...
အသုံးပြုနေတဲ့ User တွေကသာ သတိလေးနဲ့ သုံးစွဲရုံပေါ့
Facebook ဟာ သူ့ဆီကို Log in ၀င်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Browser ရဲ့
Date .. Cookies .. History .. Proxy .. စတာတွေကို အရင်ဖတ်ပါတယ်
( ဒါကတော့ ဘယ်ဆိုက်ကို ၀င်ဝင်ပါ )
ပြီးရင် email and password တွေသိုလှောင်ထားတဲ့ php နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Log in
အချက်အလက်မှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး ပြဿမရှိဘူးဆိုရင် အကောင့်ပွင့်သွားပါတယ်
အဲဒီတော့ .. မကြာသေးမီကမှ ကိုယ့်ရဲ့ အကောင့်ကို ဖုန်းနဲ့ ၀င်လိုက်တယ် .. အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စနစ်တကျ Log out မထွက်လိုက်ရပဲ ပိတ်လိုက်တယ်
နောက် .. ခဏနေတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ကိုယ့်အကောင့်ကို ပြန်ဝင်ပြန်တယ် ..
အဲဒီမှာ Check လုပ်တဲ့အဆင့်မှာတင် Facebook အတွက် သံသယဖြစ်စရာတွေ
ရှိသွားပါပြီ .. ပထမ Log in က Log out မထွက်သေးပဲ နောက်ထပ် စက်တစ်လုံးက
Log in ၀င်လာပြန်ပြီပေါ့ ...
Facebook account တွေ လော့ကျတတ်တာရဲ့ အဓိက ပြဿနာက အဲဒါပါပဲ
နောက်ထပ် လော့ကျနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်
Password အမှားကြီးနဲ့ ခဏခဏ Log in ၀င်ဖို့ကြိုးစားတာမျိုး
Request တွေ အများကြီး ပို့နေတာမျိုးတခြားလူတွေရဲ့ Wall တွေပေါ်မှာ လင့်ပါတဲ့ စာသားတွေ သွားသွားတင်တတ်တာမျိုးfacebook က Ban ထားတဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေထဲကို Facebook ကို Log in ၀င်ထားရင်း သွားလည်မိတာမျိုး .. ( ဥပမာ .. http://zamal-tkj.blogspot.com ဆိုတဲ့ လိပ်စာကို
Facebook ရဲ့ တစ်နေရာရာမှာ ရေးကြည့်ပါ. .. လက်မခံတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် )
ကဲ .. အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook အကောင့်ဟာ လော့ကျနိုင်ခြေတွေ အများကြီးလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်
လော့ကျပြီးသွားရင်တော့ အကောင့်ပြန်ရဖို့ ( Unlock လုပ်ဖို့ ) တော်တော်ကို ခက်ခဲသွားပါပြီ
ဒီတော့ .. ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကုသခြင်းထက် ပိုကောင်းတယ်ဆိုသလိုပဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကောင့်လေး လော့မကျခင်ကတည်းက လော့ကျဖို့ ခက်ခဲအောင်
ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကောင့်ဟာ ကြောငြာအကောင့် ( Spam အကောင့် ) မဟုတ်တဲ့အကြောင်း
တခြားအကောင့်ပိုင်ရှင်တွေကို စိတ်အနှောက်အယှက်မပေးတဲ့အပြင် Facebook User အချို့အတွက်
အကူအညီတောင်ပေးသေးတယ်လို့ Facebook ကို အသိပေးထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်တွေဟာ တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ လော့မကျနိုင်တော့ပါဘူး ..
အဲဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ .. ဟုတ်ကဲ့ .. လွယ်ပါတယ်တစ်ကယ်ကိုလွယ်ပါတယ် .. ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုတော့ Log in ၀င်ထားရပါမယ်
ပြီးပြီဆိုရင် ဒီနေရာ ကိုသွားလိုက်ပါ
အဲဒီ Page ကိုရောက်ပြီဆိုရင် .. အောက်ဆုံးကို ဆင်းကြည့်လိုက်ရင် စာရေးစရာနေရာလေးနဲ့ Add Answer ဆိုတာလေးကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်
အဲဒီထဲမှာ အင်္ဂလိပ်လို တစ်ခုခုရေးပြီး Add Answer ကို နှိပ်လိုက်ပါ ဘာရေ။ရမှာမှန်းမသိရင်လည်း သူများရေးထားတာတွေကို ကော်ပီကူးပြီး ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်
(တော်တော်များများလည်း အဲဒီလို ကော်ပီကူးပြီး ပြန်ထည့်ထားကြတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် )
တစ်ခုရှိတာက အဲဒီထဲမှာ ဘာလင့်ကိုမှ မထည့်မိဖို့ပါပဲ .. ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့
Answer လေး တက်သွားပြီဆိုရင် Address bar မှာရှိတဲ့ လင့်လေးကို ကော်ပီကူယူလာပြီးကိုယ့်ရဲ့ Friend တွေကို ပေးပါ .. သူတို့ကို ကိုယ့်ရဲ့ Answer ရဲ့အောက်က Helpful ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းပါ Helpful အရေအတွက် များလေကောင်းလေပါပဲ ..( ဒါပဲနော် .. နည်းလမ်းပြောပြတဲ့ ကျွန်တော့်
Answer ကိုလည်း Helpful နှိပ်ပေးထားခဲ့ရမယ် .. မစိမ်းကားကြေး)
တခြားသူတွေကိုလည်း သူတို့ရေးထားတဲ့ Answer လေးတွေကို Helpful နှိပ်ပြီး အကူအညီပေးပါ
ဒီ Feature လေးက Facebook အကောင့်ကို အသစ်ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာ လော့ကျတာမျိုးမဟုတ်ပဲ
အသုံးပြုနေရာကနေ လော့ကျတာမျိုးဆိုရင်တောင် အဲဒီ Page မှာ Helpful များများရအောင်လုပ်နိုင်ရင်
အဲဒီအကောင့် ပြန်ရပါတယ် ..ကဲ . အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ
Special Thanks To အိုင်တီမုဆိုး Read More
Huawei U8951(G510-0010) Build Number B165-168 နဲ့စတဲ့ ဖုန်းတွေ Root လုပ်နည်း 4:38 PM
minhtet: ကိုပေါက်ရေ..HUAWEI g510 build no168 ကို ဘယ်software နဲ့ root ဖောက်ရင် ရမလား
Huawei U8951(G510-0010) မှာ Build Number တွေ မတူကြပါဘူး.. ခုပြောပြမယ့်နည်းကတော့ Build Number B165, B168 နဲ့စတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက်ပါ...
Root မလုပ်ခင် ပြင်ဆင်ခြင်း 1. ပထမဆုံး အောက်ကလင့်တစ်ခုခုမှာ G510-0010-C17B165_ROOT ဖိုင်ကို ဒေါင်းပြီး ဖြည်လိုက်ပါ.. ရလာတဲ့အထဲမှာ dload ဆိုတဲ့ Folder တစ်ခုလုံးကို ဖုန်း SD Card ထဲကို ထည့်လိုက်ပါ.. သူတစ်ဖိုင်တည်းပဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်... တစ်ခြားဖိုင်ရှိနေရင် Format ချပြီးမှ ထည့်ပါ.. Card က အနည်းဆုံး2GB ရှိသင့်ပါတယ်.. ပြီးရင် ဖုန်းမှာ တပ်လိုက်ပါ...
Dev-Host Zippyshare DropBox
2. ပြီးရင် ဖုန်းကို Power ပိတ်လိုက်ပါ.. ဖုန်းရဲ့ Vol - Vol+ Power ခလုပ်သုံးခုကို တွဲပြီးနှိပ်ထားလိုက်ပါ.. ပန်းရောင်အပြားသေးသေးလေးတက်လာပြီး
ပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်.. ပြီးရင် သူ့အလိုလို Restart ကျသွားပြီး ပြန်တက်လာလိမ့်မယ်...
1. ကွန်ပျူတာမှာ Phone Driver တင်ထားပါ.. မရှိရင် ဒီမှာ ဒေါင်းပါ...
2. ဖုန်းမှာ Setting > Applications > Development > USB Debugging နဲ့ Setting > Applications> Unknown Source ကို အမှန်ခြစ်ထားပါ.. ပြီးရင် ဖုန်းကို USB ကြိုးသုံးပြီး ကွန်ပျူတာမှာ တပ်လိုက်ပါ..
3. အောက်ကလင့်မှာ Unlock Root 3.1 ကို ဒေါင်း... PC မှာ Install လုပ် Run ပြီး Root နှိပ်ရုံပါပဲ။ Unlock Root က 3.36 ရှိပါတယ်.. ဒါပေမယ့် 3.1 က စမ်းပြီးသားလည်းဖြစ်ပြီး Offline Installer မို့လို့ပါ..
Download Unlock 3.1
ဖုန်းအမျိုးအစားများတွင်ပါဝင်သော Huawei device အတွက် Official Firmware တွေကိုအလွယ်တကူ ဒေါင်းလော့ဆွဲနိူင်အောင် Mediafire Link ကနေပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Y210S & Y210C ကို root မပေါက်ဘူး။အဆင်မပြေဘူးလို့ chatbox မှာလာလာအော်နေကြလို့ပါ။cwm သွင်းပီးရင်တော့ root အတွက် မခက်တော့ဘူးပေါ့နော်။ ဟုတ်ဘူးလား။
ဒီနည်းလေးကို တွေ့တာကြာပါပီ ဒေါင်းဖို့ အဆင်မပြေလို့ စောင့်မျှော်နေတာပါ
အခုညီငယ်တစ်ယောက်က share ပေးလို့ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အထဲမှာ လုပ်နည်းလည်းပါပါတယ်။ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်။
Creadit to mpx team ပါခင်ဗျာ လိုချင်ရင်တော့ ဒီမှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်
မြန်မာနိူင်ငံတွင်လူသုံးများတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားများတွင်ပါဝင်သော Huawei device အတွက် Official Firmware တွေကိုအလွယ်တကူ ဒေါင်းလော့ဆွဲနိူင...
မြန်မာနိူင်ငံတွင်လူသုံးများတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားများတွင်ပါဝင်သော SAMSUNG GALAXY device အတွက် Official Firmware တွေကိုအလွယ်တကူ ဒေါင်း...
Galaxy Mini [s5570 i ] (v2.3.6)(121.69MB) -- > http://www.mediafire.com/?rykqwnn13tox2bc Galaxy Mini [s557...
I FOUND A CLASH OF CLANS GEMS GIVEAWAY! http://clashofclanshelper.com/ - you receive free Clash of Clans gems instantly! Best players use this!! (IXYOVeoxZ6)
Published On: Sat, May 11th, 2013 Android Tutorial...
MTK Roms download
Screen maker – sale သုံးပြီး ဖုန်း ပုံစံ အမျိုးမျိ...
Copyright © 2012 For You Mobile Service | Powered by Blogger